Juan Torres Zalba. Hurukuro nemunyori weThe First Senator yeRome | Current Literature
Juan Torres Zalba. Hurukuro nemunyori weThe First Senator yeRoma
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 11/11/2021 12:00 | Yakagadziridzwa ku 24/10/2021 18:22 | Hurukuro, Vanyori, Novela
Kutora mifananidzo: Juan Torres Zalba, Facebook peji.
Juan Torres Zalba anobva kuPamplona uye anoshanda se gweta, asi munguva yake yakasununguka anozvitsaurira kumabhuku emhando dzenhoroondo. Mushure mekutumira Pompelo. Abisunhar hope, gore rakapera rakapiwa Seneta wekutanga kubva kuRoma. Ndinokutendai zvikuru nenguva yenyu uye mutsa wakatsaurirwa izvi indavhiyu, kwaanotaura nezvake uye dzimwe nyaya dzakawanda.
LITERATURE CURRENT: Yako nyowani nyowani yakanzi Seneta wekutanga kubva kuRoma. Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakabva kupi?
JUAN TORRES ZALBA: Iri bhuku rinorondedzera zviitiko zvakaitika muRepublican Roma pakati pemakore 152 kusvika 146 BC, nguva iyo chiitiko chakakosha chakaitika, Hondo yechitatu yePunic uye kubatwa kwekupedzisira uye kuparadzwa kweCarthage.
Iyi ndiyo tambo huru yebasa, kuburikidza naro tichakwanisa kuziva kutanga-ruoko vanhu vakuru vezvakaitika kare (Scipio Emiliano, Cato yekare, Cornelia, uyo ari amai vehama dzeGraco, nezvimwewo) , hondo dzakanyanya kukosha, mishandirapamwe muAfrica neHispania, nyaya dzezvematongerwo enyika dzeRoma neCarthage, mhemberero, tsika, hupenyu hwezuva nezuva uye zvimwe zvakawanda mumapeji ayo mazana masere.
Mushure mebhuku rekutanga, iro raive rakabatana nehwaro hweRoma hweguta rangu, Pamplona, ​​ndaida kutarisana nerondedzero yakakura, ine chishuvo, Nhoroondo mumabhii makuru, uye panguva ino yeRepublic yeRome ndaifarira vanhu vayo. , ese ari ekirasi yekutanga, epic yawo uye chimiro chayo chezvematongerwo enyika, nhanganyaya yekumukira kwehama dzeGraco. Uye saka, zvishoma nezvishoma, zano reinovhero rakabuda, iro randaifarira zvakanyanya pandakaenderera mberi nekunyora. Kurwiswa kwekupedzisira chete kweCarthage nemauto eRoma uye kuti mamiriro ezvinhu ezvematongerwo enyika anosvika sei ndiwo akakodzera. Rakanga riri guta guru rine madziro anotyisa uye vanhu vakawanda vakagadzirira chinhu chipi nechipi. Asi vaRoma vakapinda. Zvakaitika imomo zvaifanira kutyisa.
JTZ: Chokwadi ndechekuti handisi kurangarira kuti nderipi bhuku randakatanga kuverenga. Ndingati mumwe weVashanu. Sisi vangu vaiva navo vese uye ndaivada.
Ndichikura zvishoma, kwete zvakanyanya, ndine rudo rwakakosha kune rimwe rine musoro Edeta's Hill, bhuku revana nezve Second Punic War. Zvinogoneka kuti zvakaratidza chimwe chinhu mandiri, chishuwo kana chido cheNhoroondo uye yeNhoroondo yeNhoroondo.
Nekudaro, ndinorangarira zvakanyanya (uye baba vangu vanodaro) nyaya yekutanga yandakanyora. Kwakanga kuri kutevedzera rondedzero dze "Vashanu", ipfupi kwazvo, asi yakanyorwa pachangu. Uye chokwadi ndechekuti kana ndichiiverenga nhasi inoratidzika kwandiri kuti haina kushata zvachose (akadaro achinyemwerera).
AL: Uye kuti munyori mukuru? Iwe unogona kusarudza zvinopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
JTZ: Ini ndinoda chaizvo zvinyorwa zvine simba, uye kwete zvekufananidzira, asi nekuda kwehuwandu hwavo. Ini ndinoda Posteguillo, hongu, asi kunyanya Colleen Mccullough, anotyisa. Manovhero ake anobva kuRoma yekare anoorora. Creation, yakanyorwa naGore Vidal, yakasiyawo mucherechedzo pandiri.
Uye kana tikasiya nhoroondo yenganonyorwa, ini ndine shungu nezvaIshe weRings. Iri rimwe remabhuku mashoma andaverenga kanopfuura kamwe (ini handisi muverengi anodzokorora).
JTZ: Ndingadai ndakada kusangana nevakawanda, uye kuvaona vachifamba-famba muRoma, vakaita saCato, Scipio Emiliano, Cornelia, Appius Claudius Pulcro, Tiberius naGaius Sempronius Graco, Sertorio, Pompey Mukuru ... uye ndine rombo rakanaka kuva vakatozvisika. Ndinoshaya vamwe, asi nguva nenguva.
JTZ: Chokwadi ndechekuti, kwete. Ndakambofunga nezvemubvunzo uyu kwekanguva, asi ndinoona kuti handina kana miitiro. Ndinonyora nguva uye sei pandinogona (kunyanya usiku kupfuura masikati), asi pasina chinhu chakakosha chekutaura kunze kwekuti ndinoda kunyarara kwakawanda. Mumba mangu vakatorairwa kuti pandinenge ndichinyora zviri nani vasanditarise (ndinozviwedzera zvishoma).
JTZ: Haaa ndambopindura. Nguva yandinofarira ndeyehusiku (ini ndiri zizi), uye kana iri nzvimbo, ndinoichinja dzimwe nguva, dzimwe nguva mukamuri yangu yekurara, vamwe patafura yekubikira, vamwe mukamuri inoshanda sehofisi ... maererano kwandiri ipa uye nekunzwa kwandinoita kugadzikana.
JTZ: Rudzi rwandinoda zvakanyanya ibhuku renhoroondo. Kunze kwayo, rudzi rwekufungidzira runondikwezvawo, asi sezvavanotaura, mbudzi inodhonza gomo.
JTZ: Parizvino ndakanyura mukuenderera mberi kweThe First Senator yeRome. Kuverengera kunakidzwa nekuverenga handina nguva izvozvi. Basa rangu rinotoda kuzvipira kukuru, uye nzvimbo yandinayo ndeyekunyora. Muzhizha ndakatora zororo naEl Conquistador, naJosé Luis Corral.
JTZ: Ndinotenda kuti harina kunyorwa nekutsikiswa zvakanyanya sezvazvakamboita, mumapepa nemhando yedhijitari. Ichokwadi kuti kune vanyori vekutanga kuwana muparidzi kwakaoma chaizvo, pamwe nekutengesa, sezvo makwikwi uye unhu hwakanyanya. Mune mhaka yangu, ndine rombo rakanaka kuva neimba yekudhinda inonditarisira zvikuru (Iyo nzvimbo yemabhuku). Ini zvakare ndinoona kuti kune akawanda mabhuku mablogiki (akafanana neaya), mapoka ekuverenga, mapoka pasocial network ane zviuru zvenhengo, nezvimwe, izvo kunze kwekupa kuoneka kunogamuchirwa kwazvo, zvinoratidza kuti kufarira kuriverenga kuzere. effervescence.
Chimwe chinhu kukuvadza kunoitwa nepiracy, iyo inoita seyatekeshera. Kuedza kunoenda mukugadzira riini kana chero basa rekunyora kwakakura, uye zvinoshungurudza kuona mafambisirwo anoitwa mabhuku epirated.
Kune vamwe vose, munguva pfupi yapfuura takaona kuti vaparidzi vakakura sei vanosaina vanyori, izvo zvinoratidza kuti nyika yokudhindisa iri kufamba, kuti iri kurarama zvikuru.
JTZ: Pandiri handina kushaya basa (zvakasiyana chaizvo) uye handina kumbosangana nezvinhu zvinorwadza, saka ndinofunga handina chikonzero chekunyunyuta. Kunyangwe zvakadaro, ichokwadi kuti, sevamwe vese, ndine chishuwo chikuru chekudzoreredza hupenyu hwapfuura, mufaro wayo, kufara, kufamba kana kukwanisa kuva nemhuri neshamwari pasina kutya. Zvakadaro, handifungi kuti ndichawana chero chinhu chakanaka kune nyaya dzemangwana. Yave iri nguva yakareba uye yakaoma iyo yakanyatsosara kumashure.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Juan Torres Zalba. Hurukuro nemunyori weThe First Senator yeRoma